रजनीकान्त अस्पताल भर्ना
अभिनेता रजनीकान्त अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी नियमित चेकअपका लागि चेन्नइको कावेरी अस्पताल भर्ना भएका हुन् । अभिनेता बिहिबार ४ः ३० मा अस्पताल पुगेका थिए ।७० वर्षीय अभिनेता यस अगाडि २०२० मा हैदरावादको एपोलो अस्पताल भर्ना भएका थिए । थकान र रक्तचापमा उतारचढाव अनुभव गरेका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको उनी दुई दिनमै डिस्चार्ज भएका थिए । मृगौला प्रत्यारोपण समेत गराइसकेका रजनीकान्त छिट्टै फिल्म ‘अन्नातेमा’ मा देखिनेछन् । फिल्म ४ नोभेम्बरमा रिलिज हुँदैछ । सन् पिक्चर्सले निर्माण गरेको फिल्म सिरुथ
रजनीकान्त अस्पताल भर्ना, माइनर सर्जरी गरियो
वरिष्ठ अभिनेता रजनीकान्तको शुक्रबार कावेरी अस्पतालमा माइनर सर्जरी गरिएको छ । अस्पतालको तर्फबाट जारी मेडिकल बुलेटिनका अनुसार बिहीबार रिंगटा लगेपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए ।अस्पतालका मुख्य अर्थोपेडिक सर्जन डा. अरविन्दन सेल्वाराजका अनुसार ७० वर्षीय कलाकारलाई कैरोटिड आर्टरी रीवेस्कुलराइजेसनको सल्लाह दिइएको थियो । जसलाई शुक्रबार सम्पन्न गरिएको हो । यसपछि रजनीकान्तको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको डाक्टरहरूको भनाइ छ । यद्यपि उनले केही दिन अझै अस्पतालमा नै बिताउनुपर्नेछ । शरीरको कुनै पनि अ
काठमाडौं । भारतीय सुपरस्टार रजनीकान्त अस्पताल बिहीबार राति भर्ना भएका छन् । ७० वर्षीया रजनीकान्तकी पत्नी लताले एक नोट जारी गर्दै उनी नियमित परीक्षणका लागि चेन्नाईको काभेरी अस्पतालमा भर्ना भएको र एक दुई दिनमा ‘डिस्चार्ज’ हुने विश्वास ब्यक्त गरेकी छन् । रजनीकान्तका फ्यानहरूले उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । […] The post रजनीकान्त अस्पताल भर्ना appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
अस्पताल भर्ना भए रजनीकान्त
Nepali Patra आश्विन २०७८
नियमित जाँचका रजनीकान्त अस्पताल भर्ना
एजेन्सी १२ कात्तिक: बलिउड सुपरस्टार रजनीकान्त अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी नियमित जाँचका लागि चेन्नइको कावेरी अस्पताल भर्ना भएको उनका बिश्वास पात्रले सञ्चारमाध्यमहरुलाई बताएका हुन् । अभिनेता पब्लिसिस्ट रियाज के अहमदको भनाईलाई उदृत गर्दै सञ्चनरमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ,‘यो नियमित रूपमा गरिने स्वास्थ्य जाँच हो। उनी अहिले निजी अस्पतालमा चेकअपका लागि छन् भर्ना भएका […]
रजनीकान्त बिमार, अस्पताल भर्ना
दक्षिण भारतीय चलचित्रका सुपरस्टार रजनीकान्त बिरामी भएका छन् । उनी अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । उनलाईचेन्नईको कावेरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो ।
HamraKura आश्विन २०७८
अभिनेता रजनीकान्त अस्पताल भर्ना
भारतका प्रख्यात अभिनेता रजनीकान्तको स्वास्थ्य अचानक बिग्रिएको छ। उनलाई हैदराबादस्थित अपोलो अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। चिकित्सकको टोलीले हेरिरहेको छ।
नागरिक दैनिक मंसिर २०७७